Qaybo ka mid ah warshadaha weelasha CNC oo jaban iyo alaableyda | Ouzhan
Naxaasku waa wax isku darsan oo ka kooban naxaas iyo zinc. Waa shey ku habboon soo saarista qaybaha mashiinnada CNC (oo ay ku jiraan qaybaha leexinta CNC).
Brass CNC jeestay processing-saxnaanta naxaasta qaybo jeestay
Brass CNC leexinta waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu beddelo qalab wareeg ah oo leh qalab leexin ah. Daloolinno, dib-u-fiirinno, reamerro, tuubbooyin, dhimashooyinka iyo qalabka kala-goynta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa lathe-ka si loo helo hawl u dhigma. Lathes-ka waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinnada mashiinnada lagu duubo, saxannada, gacmo-gacmeedyada iyo shaqooyinka kale ee leh dusha wareega. Iyagu waa nooca ugu ballaaran ee loo isticmaalo mashiinka mashiinka lagu farsameeyo ee soo saarista mashiinnada iyo dib u hagaajinta.
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan Brass Qaybo Jeedsaday
- Muddo dheer.
- Caabbinta adag ee adag.
- Ductility wanaagsan.
- Dabacsanaanta iyo miridh diidka, dulqaad yar, saxnaan sare.
- Awood adag oo silig ah, ka-hortagga miridhku.
- Xaqiijinta qalabka ee leexashada ganaaxa waxay gaari kartaa IT8 ～ IT6, dusha sare ee dusha sare ee Ra wuxuu gaari karaa 1.6 ～ 0.8μm.
OEM caadadii naxaas jeestay adeegga-Shiinaha Shanghai Ouzhan CNC naxaas jeestay qaybo soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, CNC-saxnaanta sare ee leexinta qaybaha naxaasta leh tayo deggan oo la isku halleyn karo waa la shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka howlgalka waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka jeedsada. Intaa waxaa dheer, alaabada CNC ee jeedsada alaabada naxaasta ah ee la bixiyo waxay si adag ugu hoggaansan tahay heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan ah naxaasta alaabada u weecisa alaabada macaamiisheena qaaliga ah.
Codsiga qaybo naxaas ah oo naxaas ah
Lathes-ka waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinnada mashiinnada lagu duubo, saxannada, gacmo-gacmeedyada iyo shaqooyinka kale ee leh dusha wareega. Iyagu waa nooca ugu ballaaran ee loo isticmaalo mashiinka mashiinka lagu farsameeyo ee soo saarista mashiinnada iyo dib u hagaajinta.
Faa'iidooyinka Ouzhan Naawinta Adeegga Nolosha
- Dhammaan alaabada saxda ah ee loo yaqaan 'CNC' waxay soo jeesteen alaab naxaas ah waxay ku xiran yihiin baaritaanno tayo leh oo adag.
- Marka laga hadlayo maareynta naxaasta, faa iidada ugu weyn ee aan leenahay waa soo saarista qalabka naxaasta ah, filtarka kubbadda cagta, iwm.
Hore: Qaybo caag ah oo ka shiidaya CNC
Xiga: Qaybo ka mid ah qalabaynta qalabka wax lagu farsameeyo oo naxaas ah
Naxaas farsamo kartoo qaybo jirsado proce ...